လျှော့နိုင်ရင် ချမ်းသာတယ် အစား လျှော့နိုင်ရင်ရုပ်ခန္ဓာ ကျန်းမာတယ်။ အသွားတွေ လျှော့နိုင်ရင်ခလုတ်တိုက်တာ နည်းသွားတယ်။ အပြောတွေ လျှော့နိုင်ရင်အမှားနည်းသွားတယ်။ အပျော်တွေ လျှော့နိုင်ရင်အပျက်တွေ နည်းသွားတယ်။ လိုချင်တာတွေ လျှော့နိုင်ရင်ရှိတာလေးနဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်လာတယ်။ သံသယတွေ လျှော့နိုင်ရင်နေရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု ရှိလာတယ်။ မခံချင်စိတ်တွေ လျှော့န်ိုင်ရင်မကျေနပ်လို့ ရန်ဖြစ်တာတွေနည်းသွားတယ်။ အားလုံးလျှော့န်ိုင်ရင် ချမ်းသာတယ်။ဘဝဆိုတာ တိုတောင်းပါတယ်။ ပိုနေတာတွေ လျှော့ချပြီးလိုအပ်တာတွေ ဖြည်းဆည်းနေဖို့လိုတယ်။ …
အချစ်ဆိုတာကတော့ ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့အရာလို့ ဆိုရမှာပါ။ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို လူတိုင်းက အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖွင့်ဆို တတ်ပါတယ်။ အရာတိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံးအရာဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တော်သင့်သလောက် ပမာဏနဲ့ ညီတူမျှတူ ဟန်ချက်ညီနေတာမျိုးကတော့ ကြည်နူးစရာ အချိန်လေးတွေဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ချစ်သူတွေကြားက ချစ်ခြင်းတွေကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေပါစေ လိုတာထက် …
ကျဉ်းအောင် ခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး၊ ပိတ်သွားလို့ ဒုက္ခရောက်နေ
အသက်(၄၇)နှစ်အရွယ် ထိုင်ဝမ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ခင်ပွန်းသည်က တစ်ခြားမိန်းမတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာကြောင့်၊ သူမ မျိုးပွားအင်္ဂါလမ်းကြောင်းကို ခွဲစိတ်ပြီး ကျဉ်းခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အမျိုးသား တစ်ခြားအမြှောင်မယား ထားရခြင်းမှာ ဒီကိစ္စကြောင့်လို့ အထင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ခွဲစိတ်လိုက်ရင်၊ ခင်ပွန်းသည်က သူမကို တန်းတန်းစွဲပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အထင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျ သင့်တင်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု(၆)ကြိမ်အထိ သူမ အသက်(၄၄)နှစ်ကတည်းက လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် …
သံလွှင်တံတား ပိတ်လိုက်ရ၊ရေးမြို့ အကူညီလိုအပ်၊သံဖြူဇရပ်လမ်း တံတားကျိုး၊တနင်္သာရီဖြစ်ရေစိုးရိမ်ရေမှတ်
မော်လမြိုင်၊ သြဂုတ်- ၉ ….သံလွင်တံတား (မော်လမြိုင်) ယာယီ ပိတ်ထား မိုးသည်းထန်​စွာ ရွာသွန်းပြီး မုတ္တမဘက်​ခြမ်းတွင်​ ကားလမ်း​ရေ​ကျော်​​နေသောကြောင့်် …. ယ​နေ့ နံနက်​ ၆ နာရီခွဲမှစ၍ သံလွင်​တံတား(မော်​လမြိုင်​) ကိုယာယီပိတ်​ထားကြောင်း သိရသည်​။ နေမင်း ရေး၊ သြဂုတ် ၉ ….ရေးမြို့နယ် ကျောင်းရွာတွင် ရေနစ်မြုပ် အကူအညီလိုအပ်နေ ရေး​မြို့နယ်၊ ကျောင်းရွာကျေးရွာတွင် …
တနလာင်္သမီးတွေကို ချစ်မိရင် သတိထားရမယ့်အချက်များ ….. မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူတွေက နေ့နာမ်ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တနင်္လာသမီးတွေကို ချစ်မိရင်တော့ ဒီအချက်တွေနဲ့ သတိထားလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ … ၁။ တနင်္လာသမီးတွေက ။ ။ ခေါင်းမာတတ်တယ်။ တနင်္လာသမီးလေးတွေကတော့ ခေါင်းမာတတ်တဲ့နေရာမှာ ပထမပါ။ သူတို့ပြောချင်တာ၊ လုပ်ချင်တာဆို တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တယ်။ ပြီးရင်လည်း ခေါင်းမာတတ်သေးတယ်။ သူတို့နဲ့ချစ်မိရင်တော့ ဒီအချက်လေးကို …
မအိပ်တဲ့ အချိန်တွေများလာတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ .. ?
မအိပ်တဲ့ အချိန်တွေများလာတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ .. ? တစ်ညတာအိပ်မပျော်ပြီးနောက် ၆နာရီကြာသောအခါ … တစ်ညလုံးမအိပ်ရသောအခါ သင့်ကိုယ်ထဲမှာ ကော်တီစောလို့ခေါတဲ့ ဟိုမုန်းများမြင့်တက်လာပါတယ်။ထိုဟိုမုန်းကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများလာပြီး စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊စိတ်တိုခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ ခံစားရပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာသောအခါ … ဦးနှောက်ကနေ တစ်စုံတစ်ခုကိုတုံ့ပြန်ချိန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချချိန်တွေ နှေးကွေးလာပါတယ်။ဒါပေမယ့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသေးတယ်။ မအိပ်တဲ့ အချိန်တွေများလာတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ .. ?(၁) …
မိန်းကလေးတွေ အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဒါလေးတွေ လုပ်တတ်တယ်… အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ နားချချ နားမဝင် နိုင်တော့ဘူး…အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့် ချစ်သူကို မကောင်းဘူး ပြောလည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နိုင်သွားတယ်.. အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ် လက်တွဲမဲ့သူ မပြည့်စုံတာ …
“ ဖောက်ပြန်တဲ့သူကို ပစ်ထားပြီး ပိုလှအောင်နေပါ ”
“ ဖောက်ပြန်တဲ့သူကို ပစ်ထားပြီး ပိုလှအောင်နေပါ ” ….. ဖောက်ပြန်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေချည်းပဲ ကြားကြားနေရလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဘက်က အခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်အသဲနာပြီး ဒေါသတွေထွက်၊အပြစ်တွေအပြန်အလှန်တင်၊ရန်ဖြစ်၊အအိပ်ပျက်အစားပျက်ပြီးရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ သေချင်လောက်အောင် စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ကြရပါတယ်၊အချို့ဆို ဘဝပျက်၊အနာဂတ်မဲ့တဲ့အထိ ဖြစ်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ကျမအနေနဲ့အဲဒီလို မဖြစ်ကြစေလိုပါဘူး။ အရေးကြီးတာကတော့ ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့အခါကိုယ့်အတွက် စိတ်ရောရုပ်ပါ ထိခိုက်မှု နည်းပါးစွာနဲ့ အလှမပျက်၊ ဘဝမပျက်ဘဲနဲ့ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ “ ဖောက်ပြန်တဲ့သူကို …